Magnum PUBG Mobile mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Magnum PUBG Mobile (Emulator) Mbanye anataghị ikike
Jiri anyi PUBG Mobile Magnum emulator wepu ndi iro n’udo.
Were ule nke PUBG Mobile Private Magnum Hack - Purzụta Ngwaahịa -bọchị 1 Taa!
Gini mere obi adighi gi nma igbanye egwu na PUBG Mobile. - Zụta Igodo Ngwaahịa Izu 1 Taa!
Bụrụ onye otu aka na ezinụlọ Gamepron nke enyere site na PUBG Mobile - Zụta Igodo Ngwaahịa Ọnwa 1 Taa!
PUBG Mobile nwere ike ịdị ike dịka ụdị "oge", ọ bụ ya mere iji hacks kwesịrị ekwesị ka dị mkpa. Tinye onwe gị n’ọnọdụ ike site n’inweta PUBG Mobile Magnum emulator!
PUBG Mobile (Emulator): Ozi nzuzo Magnum
Kpọ PUBG Mobile na emulator na-enye gị ohere iji mbanye anataghị ikike ọ bụla ịchọrọ, nke zuru oke maka ndị chọrọ nnukwu uru ga-ekwe omume. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-agba mbọ igwu egwu na ekwentị ha, ị ga-eji ihe kachasị mma PUBG Mobile Hacks gburugburu (ma jiri ha na ihuenyo kọmputa!). Pụrụ ịdabere na WinThatWar ịnapụta ndị kasị mma hacks kwere omume, n'agbanyeghị ihe egwuregwu bụ. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-enye ọrụ nwere ike ichefu banyere PUBG Mobile, anyị na-eweta okpomọkụ na kwa otu ntọhapụ! Mbanye anataghị ikike na-enweghị nchegbu na ịzụta ohere ka PUBG Mobile n'onwe Magnum mbanye anataghị ikike taa!
Dịka ị ga - ahụ na PUBG Mobile mbanye ọzọ a tụkwasịrị obi, ngwa ọrụ a nwere Player ESP (Bone-Boxes and Snaplines), Anya Iro, Ozi Iro (Health and Armor), yana PUBG Mobile Aimbot kensinammuo. Na-enwe Ezigbo Aiming na FOV Circle (n'etiti ihe ndị ọzọ), nke a PUBG Mobile eji Aghọ Aghụghọ Ule na-enye ọtụtụ.
Aimbot (Jide ma ọ bụ Mkpọchi akpaaka)
Carsgbọ ala ụgbọ ala
Banyere PUBG Mobile Emulator: Onwe Magnum
O yikarịrị ka PUBG Mobile Hacks ịhọrọ site na mgbe mbụ ị lere ahịa ahụ anya, mana ọ bụrụ na ha esighi na WinThatWar, ịnwere ike ịhapụ ha na ndepụta ahụ. Nke a mbanye anataghị ikike nwere ihe niile dị gị mkpa iji zipu ndị iro gị na-agba ọsọ ụjọ, ma ọ dị mma n'ihi na ị ga-achụ nta ha obere oge mgbe nke ahụ gasịrị! Emepụtara maka iji na Windows 10 igwe, CPU akwadoro maka ngwa ọrụ a bụ Intel na AMD, ebe GPU akwadoro bụ Nvidia na AMD. Agbanyeghị na ị nwetaghị HWID Spoofer na nzụta ngwaahịa a, anyị na-enye ha maka ọrịre na WinThatWar!
Gini mere iji jiri PUBG emulator: Magnum nke ndi ozo?
Ọ bụrụ na iji gị iji ngwa ọrụ na-ahapụ gị ka ịchọrọ karịa, ịnwalebeghị PUBG Mobile Cheats nke WinThatWar na-enye. Anyị agaghị anwa anwa isoro onye ọ bụla mmepe na-adịghị mkpa banyere ọrụ ha, nke mere na anyị nwere ike ijikọ ndị ahịa anyị na PUBG Mobile Hacks kachasị elu. Ọ dị mma mgbe niile ị na-etinye ego gị na WinThatWar ma ọ bụghị ebe ọ bụla ọzọ n'ihi na onye ahịa ahụ bụ eze ebe a. Ihe niile anyị PUBG Mobile Hacks bụ 100% mma! Itinye akaụntụ gị n’ihe egwu bụ ihe gara aga mgbe ị ji aghụghọ na PUBG Mobile Private Magnum mbanye anataghị ikike.
Ntọala nchịkọta egwuregwu n'ime egwuregwu anaghị adị mgbe niile, ọ bụ ya mere PUBG Mobile Private Magnum Hack ji dị elu karịa ọtụtụ. Nwere ike ịgbanwe mbanye anataghị ikike ntọala mgbe ọ bụla mgbe ị na-egwu egwu, nke pụtara na ị gaghị emechi ngwa ahụ! Offọdụ n'ime ọnụ ala PUBG Mobile Ndị aghụghọ ị na-ahụ
ma gosipụta ihe nchịkọta egwuregwu egwuregwu zuru oke, ma ọ bụ na ọ gaghị ewepụta ya ma ọlị; nke ahụ bụ ihe na - eme WinThatWar onye na - eweta 1 PUBG Mobile Cheats n’ịntanetị! Ọ dịghị mkpa ịlụ ọgụ na ntinye, ntinye, ma ọ bụ nhazi nke PUBG Mobile Private Magnum Hack, ebe ihe niile kwụ ọtọ (na nke ka mkpa, n'ụzọ).
Iji emulator na-agba ọsọ PUBG Mobile ga-enye ndị ọrụ ohere igwu egwu na oke na keyboard, yana inye ha ohere ịtụnanya niile gụnyere n'ime PUBG Mobile Magnum Hack.
Agbalịla igwu egwu na ihuenyo ekwentị ma jiri GamePron nọrọ n'ihu.
Njikere Na-achị na anyị PUBG Mobile (Emulator) - Private Magnum Hack?